Soosaarka Soosaarayaasha Soosaarayaasha Ugu Fiican iyo Warshad | Farshaxanka & Farshaxanka Jesson Flag
Ku Noolaada Bandhigyadaada Ganacsi ee leh Boot popup xarrago leh
Marka lagu soo bandhigayo bandhig ganacsi, waxaa lagama maarmaan ah in la abuuro wacyigelin calaamadeed iyada oo la abuurayo xiriiro si loo abuuro jiil hoggaamineed. Soo-baxayaasha xayeysiinta ayaa isbeddel sameyn kara. Xarunta Cilmi-baarista Warshadaha (CEIR) ayaa soo warisay in 81-boqolkiiba dhammaan kaqeybgalayaasha ganacsiga ay leeyihiin awood wax iibsasho. Taasi waxay ka dhigan tahay shantii qofba afar ka mid ah oo lugeynaya meheradaha ganacsiga oo arkaya qolkaaga, waxay leeyihiin suurtagal inay noqdaan macaamiishaada. Miyuu meheraddaadu muujin doontaa waab ay ku jiidan doonaan ka qaybgalayaasha?
CFM waxay u fidisaa oo keliya heerka ugu sarreeya ee qalabka loogu talagalay soo-saaristayada xayeysiinta iyo alaabooyinka kale ee soo-bandhigga ah. Qalabka soo-baxa popup waxaa ka mid ah isku-darka alaabada jilicsan iyo jilicsan. Waa mid waara oo had iyo jeer dusha kaamil ah si loo muujiyo midabada firfircoon ee astaan ​​shirkadeed ama naqshadeynta muuqaalka.
Adeeg Tayo Gaarka ah oo Dammaanad Leh
Waan ognahay in qorshaynta bandhig bandhig ganacsi ay tahay mid waqti badan qaadata oo badanaaba walaac badan. CFM waxaan rabnaa inaan kaa caawinno inaan xoogaa ka qaadno culeyskaas. Taasi waa sababta aan diiradda u saareyno oo keliya inaan ku siino adiga qalabka ugu fiican ee xayeysiinta daabacaadda dharka, laakiin adeegga macaamiisha ee gaarka ah.
Soo-saar Boot oo ka kooban 3 qaab oo Ikhtiyaarro ah
Booth-ka soo baxa ee indhaha soo jiidan kara ayaa kaa caawin kara inaad ka dhigto bandhiggaaga ganacsiga inuu ka dhex muuqdo dadka. Buuqyada xayeysiinta ee ka socda CFM waxay bixiyaan bandhigyo tayo sare leh oo qaabab kala duwan leh, oo ay ku jiraan oval, triangle iyo square. Kuwani waa soo-saarisyo dhar-bannaan oo gudaha iyo dibedda ah oo aan la barbardhigi karin oo loogu talagalay gaar ahaan qolkaaga.
Naqshadaynta Muuqaalka Booth
Shirka Booth Backdrop
Muuji Booth Backdrop
Boot Display Booth
Ganacsiga Show Booth Backdrop